Le yiXiaomi Mi 6 entsha ene-6GB ye-RAM kunye ne-Snapdragon 835 | I-Androidsis
Le yiXiaomi Mi 6 entsha ene-6GB ye-RAM, i-12 MPx ezimbini zekhamera kunye ne-Snapdragon 835
UXiaomi ekugqibeleni ubhengezile iflegi yakho entsha, Ngo-Wed 6, ngexesha lomsitho wakutshanje eBeijing. Isixhobo sizisa ukucaciswa kunye nezinto zoyilo esele zivuziwe kwiiveki zokugqibela.
Apha ngezantsi sityhila zonke iinkcukacha zobuchwephesha zeXiaomi Mi 6 entsha, kunye namaxabiso ayo kunye nokuba yeyiphi eyona nto inokuba yeyona ngxaki yayo.
1 Xiaomi Mi 6, iindaba eziphambili
2 Akukho jackphone eyintloko
3 Ixabiso kunye nokufumaneka kweXiaomi Mi 6
4 Iifoto kunye neenkcukacha zobuchwephesha zeXiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6, iindaba eziphambili
IXiaomi Mi 6 yiyo i-smartphone yokuqala yomenzi waseTshayina ukufaka iprosesa entsha Snapdragon 835 IQualcomm, esekwe kwinkqubo ye- 10nm kwaye unayo I-8 cores kunye nesantya esiphezulu se-2.45GHz. I-chipset ikwabandakanya iyunithi umzobo Adreno 540, eyi-25% ngokukhawuleza kunangaphambili, iAdreno 530.
I-smartphone izisa nophuculo ngokwendlela yoyilo, ukusukela ngeli xesha ineqhayiya ngesakhelo sesinyithi esenziwe ngentsimbi engenasici kunye Iglasi ye-3D ngaphambili nangasemva, ngokuchaseneyo nokumelana.
Ngaphantsi kwe- Isibonisi esigcweleyo esingu-5.15 intshi, Iimpawu zeXiaomi Mi 6 a Iskena somnwe Isazisi seQualcomm Sense, ngelixa ngasemva kukho ifayile ye- ikhamera ezimbini kunye ne-2x zoom zoom ngaphandle kwelahleko.
Ikhamera emibini yeXiaomi Mi 6 ifaka ifayile ye Iilensi ezili-12 ze-megapixel ebanzi-engile ngozinzo lwamehlo I-4-axis imaging, kunye ilensi yefowuni enesisombululo esinye se-12 MPx. Kwelinye icala, ikhamera yangaphambili ye-smartphone entsha inomthamo wee-megapixels ezi-8 kwaye inika ukuphuculwa kobunzulu bentsimi yee-selfies.
Akukho jackphone eyintloko
IXiaomi Mi 6 ikwabandakanya izithethi ezibini ngaphezulu nasezantsi kwendawo yayo yangaphambili. Ubungakanani bebhetri ye-smartphone entsha yile 3.350mAh, into enkulu kunaleyo ye- Galaxy S8, iPhone 7 kunye Huawei P10.
Umvelisi waseTshayina ukwathe ibhetri izakuxhamla kulwenziwo oluninzi lwe-MIUI interface eya kuyivumela ukuba ifikelele kuluhlu olusetyenziswayo ukuya kusuku olunye lokusetyenziswa.
Phakathi kwezinye izinto, i-smartphone inayo 2 × 2 iteknoloji ye-WiFi emibini Unxibelelwano olungcono, kunye ne I-6GB ye-RAM ukuya kuthi ga kwi-128GB yendawo yokugcina.
Icala elisezantsi kuphela leXiaomi Mi 6 yile ayizi ne-headphone ye-3.5mm, ke kuya kufuneka ubhenele kwezinye Iingcingo ezingenazingcingo ukuze ukwazi ukumamela umculo owuthandayo.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweXiaomi Mi 6
IXiaomi Mi 6 iya kuthengiswa ngokusesikweni ngo-Epreli 28, nangona ukubhukisha kwangaphambili kunokwenziwa ngoku. Iselfowuni iza kuza ngombala isilivere, mnyama namnyama, kwaye ixabiso layo liya kuba $ 360 kwimodeli engama-64GB yendawo yokugcina, ngelixa Inguqulelo ene-128GB yememori iya kubiza i-420 yeedola okanye malunga nama-euro angama-400 ukutshintsha.
Okokugqibela, abathengi kuya kufuneka bakhuphe i-435 yeedola kwimodeli ene-128GB yememori yangaphakathi kunye iigobolondo zangasemva zeceramic.
Njengamaxesha onke, utshintshiselwano lwemali alusizuzi kakhulu kwaye ukuba ufuna ukuthenga iXiaomi Mi 6 ngoku kuya kufuneka uhlawule malunga ne-450 euros yemodeli ene-64GB yememori. Nangona kunjalo, iXiaomi Mi 6 isabiza kakhulu kunezinye ii-mobiles eziphakamileyo ezinje ngeGPS S8, oya kuthi uhlawule ngayo malunga ne-300 euros ngakumbi kwaye uya kuthi ufumane izibonelelo ezifanayo, ngokwahluka okuncinci.
Iifoto kunye neenkcukacha zobuchwephesha zeXiaomi Mi 6
Umzekelo Xiaomi Mi 6
Isikrini 5.15 intshi IPS LCD
Isigqibo I-HD epheleleyo ye-1920 x 1080 pixels (iipikseli ezingama-428 nge-intshi)
Inkqubo I-835GHz Octa-Core Snapdragon 2.45
Imizobo Adreno 540
i-ram I-6GB ye-RAM
Imemori yangaphakathi 64GB / 128GB
Cámara trasera I-12 MPx i-lens-angle angle kunye ne-F / 1.8 ukuvula + ukuzinza kwe-optical + isigaba se-autofocus + 12 MPx lens telephoto lens kunye ne-2X zoom zoom
Ikhamera yangaphambili I-8 MPx
Ukurekhoda iividiyo 2160P kwi-30FPS okanye kwi-720P kwi-120FPS
Conectividad I-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac + iBluetooth 5.0 + NFC + i-USB yohlobo C
IGPS Ewe nge-A-GPS / GLONASS kunye neBDS
Izixhobo Isikena esingaphambili seFingerprint + Accelerometer + iGyroscope + Isenzi soSondelelo + seCompass yedijithali + neBarometer
Ibhetri I-3350mAh ngeTekhnoloji ekhawulezayo yokutshaja 3.0 ngokukhawuleza
Imibala Mnyama / Luhlaza / Silivere
Inkqubo yokusebenza I-Android 7.1.1 ene-MIUI 8.0 ujongano
Ubunzima kunye nemilinganiselo I-145.2 x 70.5 x 7.5 mm / 168 iigrem kwimodeli esemgangathweni kunye ne-182 g yemodeli yeceramic
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Le yiXiaomi Mi 6 entsha ene-6GB ye-RAM, i-12 MPx ezimbini zekhamera kunye ne-Snapdragon 835
UGoogle uzakuphumeza isibhlisi sentengiso kuzo zonke iinguqulelo zeChannel
Imixholo ebalaseleyo yeTelegram, (Izikhumba), zisimahla kwaye akukho mfuneko yokuba ufake nantoni na engaqhelekanga